Zvirongwa zveMicrosoft zvatava kukwanisa kuisa nekushandisa muGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Joaquin Garcia | | General, Free Software
Chiratidzo chepropetiary software, inorambidza software, yagara iri Microsoft. Bhizinesi rako neWindows yako zvagara zviri pamakomputa mazhinji epamba uye zvave zviyero zvevashandisi vasina ruzivo. Asi izvi hazvireve kuti ndicho chete chinhu. Gnu / Linux uye Mahara Software iri kukura zvishoma nezvishoma, kunyangwe pakati pezvikamu zveBill Gates rakakura Microsoft.
Tevere isu tichataura nezvazvo mapurogiramu akakosha eMicrosoft ave Mahara Software nesarudzo yeMicrosoft nevashandisi vayo.
1 Skype yeLinux
5 Chero mamwe mapurogiramu emahara?
Yokutanga yezvirongwa izvi Skype, chirongwa chekutumira mameseji chakazvarwa kune ese mapuratifomu uye kuti Microsoft, mushure mekutengwa kwekambani yeSkype, yakafunga kuchengeta chirongwa cheGnu / Linux. Chirongwa ichi hachisi chekukwirana neLinux sezvazviri paWindows, asi nerombo rakanaka inoramba ichigadzirisa.
Microsoft inozivikanwa tekinoroji, .Net tekinoroji, yakagara iri yave kuwanikwa kuti ishandiswe paGnu / Linux. Iyi tekinoroji yakakosha nekuti zvirongwa zvazvino zveMicrosoft, senge Microsoft Office, zvakavakirwa pairi. Hatina zvirongwa izvi zvekuparadzirwa kweLinux parizvino, asi isu tinogona ikozvino kurodha pasi nekushandisa iyo .Net tekinoroji.
Rinopfuura gore rapfuura takagamuchira kushamisika kubva kuvakomana veMicrosoft, kushamisika uku inonzi Visual Studio Code, mupepeti wezvirongwa zvaienderana nemapuratifomu mazhinji uye neResoft Software rezinesi. Mumavhiki mashoma chete, Visual Studio Code yave inodikanwa kodhi mhariri yevakawanda vagadziri, kwete chete kune avo vaida Microsoft nezvigadzirwa zvayo asiwo kubva kune vanogadzira Gnu / Linux. Visual Studio Code haisi inozivikanwa Microsoft IDE, ingori yakapusa asi ine simba kodhi mupepeti.
Isu tichangobva kuona kuti sei shanduro dzeMicrosoft's database tekinoroji, Sql Server, dzakaburitswa. Iyi tekinoroji inobvumidza kusvika kwezvirongwa zvinotarisirwa senge Hofisi kana zvimwe zvinoshandiswa muwebhu zvinoda hunyanzvi hwayo. Sql server iguru maneja wedhatabhesi, asi kune dzimwe nzira dzakaenzana dzakaenzana saMariaDB.
Chero mamwe mapurogiramu emahara?
Vazhinji vashandisi vanotarisira izvozvo Microsoft inosunungura Hofisi yeLinux, chirongwa chinosara kudiwa uye icho panguva ino hachiwanikwe Gnu / Linux. Vazhinji vashandisi vanotarisira kugamuchira chimwe chinhu senge vashandisi veApple, asi panguva ino hapana chakasimbiswa.
Chimwe chirongwa chakamirirwa kwenguva refu uye chokwadika chingave shanduko huru yemafambiro mukambani yeMicrosoft, ndiko kuvhurwa kwekuparadzirwa kwayo kwakafanana neWindows. Panyaya iyi pakave nerunyerekupe nekuti vamwe mamaneja vakavabvunza, asi zvinoita sekunge mutana Bill Gates haagovane pfungwa iyi. Chero zvazvingaitika, zvinoita kunge zvishoma nezvishoma Microsoft iri kutanga nyika yeFree Software
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvirongwa zveMicrosoft zvatava kukwanisa kuisa nekushandisa muGnu / Linux
Zviripachena iwe hauzive kuti ndeipi yemahara software iri ... kuti ivo vanoburitsa mavhezheni emapurogiramu avo anomhanya pane linux hazvireve kuti ivo vari kuwana pane yemahara software bandwagon ... nyaya yeiyi ndiko kuwanikwa kwekodhi yekodhi. .. inova imwe nyaya iyo M $ isingapi chinhu.
Hazvizove pachena izvo zvaunoreva pane kusununguka?
Pindura kuna Luke10
Semuenzaniso skype haisi yemahara software mumavhidhiyo aRichard Staliman anoitsanangura.
Skype haina mahara, uye mamwe acho haana kudikanwa muLinux, kushandisa SQL kwaizodzosera kumashure
Nemashoko ako zvinoita sekunge urikutaura kuti zvirongwa izvi ndezvemahara, zviri zvemahara skype, ms sql server, nezvimwe? Zvirokwazvo kwete.
Ivo vanongoedza kuedza kuwana yakawanda musika na ms.
Windows yevashandisi vasina ruzivo?, Hahaha, ndine hurombo asi kune vechokwadi makomputa nyanzvi vanoshandisa Windows, ini ndinongoshandisa Linux, asi SEZVO ZVESE, ndaimboshandisa Windows kare, saka ndisati ndave neruzivo uye ikozvino ndiri shasha yekushandisa Linux? , chinyorwa chakapusa uye hunyanzvi hwaunotarisa, kukura zvishoma kufamba ...
Hapana chinouya kubva kuMicrosoft chichava "yemahara." Asi ini handidi (kunyangwe vazhinji vachiita) kushandisa chete mahara software, kana muzviitiko zvakawanda, tinenge tisina maturusi ekushandisa kuti tive nenguva yakanaka pamberi pePC uye kuti "nguva yakanaka" ingadai iri musoro. Ndosaka ndichida madhiri uye zvigadzirwa.
Kana iri Micro $ kazhinji, Vhura hofisi? Chaizvoizvo? Uye nei tine hofisi yemahara kana yakavhurwa hofisi?
Nezve ino saiti, zvinoita sekunge avo vanonyora vatenzi nemadzishe eruzivo. Ini ndasangana nevakuru-ve-iyo-programmers vanoshanda nelinux uye vazhinji vevashandisi ve "nyanzvi" vane, vanga kana vane bhutsu mbiri kana dhisiki rine windows uye imwe ine linux.
Iwe hausi "nyanzvi" nekuda kwesystem yaunoshandisa ... kana vashandisi veBSD vaizove masters epasi rese
Pindura kune armand